Sawiro Cajiib Ah Oo Lagasoo Qaaday Meere Aan Dhulka Ahayn Oo La Baahiyay | Gaaroodi News
Sawiro Cajiib Ah Oo Lagasoo Qaaday Meere Aan Dhulka Ahayn Oo La Baahiyay
Dayax gacmeedka oo bishii May ku degay Marays ayaa kamarad aan xadhko lahayn dhulka dhigay ka dibna duubay muuqaal kooban oo uu dhakhso u qaaday.
Waxa dhanka midig ka xiga qalabka dayax gacmeedka sida oo lix taayir leh oo si degan u cago dhigtay dhulka.
Labada muuqaalba waxa si fiican uga muuqda calanka Shiinaha
Dayaxgacmeedku wuxuu aad ugu eeg yahay ka ay wakaalada Maraykanka ee NASA dirtay ee Sprit la yidhaa iyo Opportunity ee sannadihii 2000.
Miisaankiisu waa 240 kg. wuxu leeyahay bir dheer oo kamaraduhu ku xidhan yihiin oo qaadda sawirrada iyo qalab hagidda ah. Shan kale oo dheeraad ah oo iyagana loogu talo galay baadhitaanka macdanaha ku jira dhadhaabaha Mars iyo guud ahaan deegaanka oo cimiladuna ka mid tahay ayaa ku rakiban.
Sida dayax gacmeedyada haatan ee Maraykanka (Curiosity iyo Perseverance) ayaa Zhurong isna waxa uu leeyahay qalabka laser-ka oo uu ku jajabinayo dhadhaabaha si uu u qiimeeyo dhismahooda kiimikaad. Waxa kale oo ku rakiban raadaal uu ku eegayo biyaha dhulka hoostiisa ku jira arintaas oo ah wax yaabo uu kala mid yahay Perseverance.
Khamiistii ayaa jaamacadda Maraykanka ee Arizona waxay baahisay sawirro midab leh oo laga qaaday Zhurong oo maraya majiirihiisa. Kamarada Jaamacadda oo la yidhaa HiRise ayaa waxay ku xidhan tahay dayax gacmeed ay leedahay NASA oo loo diray Mars. Sawirka dayax gacmeedka Nasa ka qaaday ka Shiinaha isagoo majiirihiisa ku jira